Baarlamanka Oo 10 Maalmood Oo Dheeraad Ah Siiyey Raysul Wasaare C/weli Waqtiga Uu Kusoo Dhisayo Xukuumadda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Oo 10 Maalmood Oo Dheeraad Ah Siiyey Raysul Wasaare C/weli Waqtiga Uu Kusoo Dhisayo Xukuumadda
Muqdisho, Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta 10 maalmood oo dheeraad ah siiyey Ra’iisul Wasaaraha cusub C/weli Sheekh Axmed ugu daray inuu kusoo dhiso xukuumadda kadib markii uu manta codsi waqti kordhin ah u gudubsaday baarlamaanka.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa baarlamaanka oo ay goobjoog ka ahaayeen ilaa 185 mudane usoo jeediyey in muddo 10 cisho la siiyo R/wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed Maxamed si uu u soo magacaabo Golahiisa Wasiirada.
Guddoomiyaha ayaa Xildhibaannada u akhriyay warqad codsi ahayd oo ka timid R/wasaaraha taasi oo ku saabsanayd in muddo 10 cisho ah la siiyo si uu u soo dhiso Xuukuumad tayo leh, islamarkaana uu u horkeeno baarlamaanka.
Xildhibaannada ayaa gudo galay ka doodidda codsiga R/wasaaraha iyadoo halkaasi ay aragtidooda ka dhiibteen 30 Xildhibaan, kuwaasi oo ka sinnaa in xilligan aan mudanayaasha la fasixi karin marxaladda lagu gudo jiro awgeed, iyadoo xildhibaannadu ku kala aragti duwanaayeen muddada tobanka cisho ee la siiyay R/wasaaraha sida ay noqoneyso.
Dood dheer kaddib Xildhibaannadu waxa ay cod u qaadeen codsiga R/wasaaraha, iyadoo “Haa” ay ku codeeyeen 142 Xildhibaan, 3 Xildhibaan ayaa ka aamustay, mana jirin cid diiday meel marinta waqtiga uu soo codsaday R/wasaaraha sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Baarlamaanka ayaa sheegay in haddii Raysul Wasaare C/weli 10 maalmood kusoo gudbin waayo xukuumadda ay ka qaadi doonaan tilaabo sharci ah.
Danjire Ameeriko Oo Soomaalida Kenya Degan Ugu Baaqay Iney Sharci Qaataan